LVD-08 NEW DEADBOLT LOCK KUUYA PASI PEDYO
LVD-08 Deadbolt yekuvharira inosangana kumusika weAmerica. Timu yeLEI-U yakapedza makore maviri ichigadzira ichi sitiroko uye ichaburitswa munaGunyana. Fingerprint makiyi anowanzo kugadzirwa nesimbi isina kukiya kukiya mitauro, asi mizhinji yeminwe yekuvharisa ndeyese-kukiya mitauro, imwe chete l ...
Smart Lock Mazuva Ano
Ikozvino, iro ramangwana re smart smart chikamu rinotaridzika richipenya. Semuenzaniso muongorori muongorori, semuenzaniso, akafanotaura kuti musika wekukiya wakangwara uchakura kubva pamadhora 1,295.57 miriyoni muna2017 kusvika paUS $ 3,181.58 miriyoni panopera 2024. Smar ...
Smart Door Lock, Chipo Chemhuri
Nguva yega yega yezororo, vanhu vazhinji vanoenda kumba kunoperekedza vabereki vavo nekuvaunzira zvipo, asi mazuvano, kana vasina kukwana kudya uye kupfeka, chipo chakanaka chekutumira zvimwe zvinhu zvinogadzikana zvinogona kubatsira mazuva ese. Inogona kuvandudza mhando yezvirimwa zvipenyu uye kudzikisira marara eac ...
9 Smart Home Matekiniki e2021
Fungidzira iwe wakaswera nezuva refu muhofisi. Wanga uchikuya kure zuva rese uye izvozvi zvese zvaunoda kuita kuti udzokere kumba uye kutonhora. Iwe unovhura yako smart imba app, iti "Alexa, ndave nezuva rakareba", uye yako smart imba inotarisira zvimwe zvese ...
2021 BEST OF IBSx ™ ZVIMWE
Yakanakisa Hwindo & Chigadzirwa Chigadzirwa -------- L-B400 Smart Door Lock MuMuvhuro 15, 2021. Zhejiang Leiyu Intelligent Hardware Technology co., Ltd yakasaina chibvumirano chakabvumidza iyo LVD-06 smart gonhi kukiya kuna Hom .. .
LEI-U "LVD-06" vhezheni iri kuburitswa.
ne admin pane 20-05-15
Iyi itsva vhezheni LVD-06 inochengeta yakafanana "bhora chimiro" seLVD-05 asi ichipfuura iyo yekare vhezheni, chete 57mm dhayamita yezvibato zvikamu. Inoona yakawanda dapper uye yakapusa kubata. Iyo yepamusoro inoshandisa iyo "yakasarudzika tekinoroji" yezvakatipurika apple aluminium. , zinc alloy semi-conductor biometric ...
Yechipiri China (Guangzhou) Yepasi Pose Kuvaka Kushongedza Fair
ne admin pane 19-07-08
8th-11th Chikunguru ------- Tiri padumba 19.1-23 kuGuangzhou. Nei International Decorative Building Expo iri indasitiri hombe yekuvandudza dzimba muAsia? Ini ...
LEI-U "LVD-05" NEMAHARA KINKI KUUYA
ne admin pane 19-06-15
Muna 15th Chikumi 2019 LEI-U “LVD-05” SMART LOCK COMING LEI-U nyowani mhando yekungwara musuwo kukiya LVD-05 iri kuuya 【SMART LOCK TECHNOLOGY】 Inobatanidza nzira shanu dzekupinda mune 1 smart kukiya, ...